Delivery ပန်းစည်းအမှတ် ၇ မော်စကိုတွင် - ပန်းများမှာယူပါ
35 စင်တီမီတာ 20 စင်တီမီတာ
အမြင့် 35 စင်တီမီတာ
နှင်းဆီ - 201 pcs ။
ပန်းပွင့်များ၏လတ်ဆတ်မှုကိုကျွန်ုပ်တို့အာမခံပါသည်။ ပန်းနုရောင်နှင့်အဖြူရောင်နှင်းဆီပန်းတစ်ပွင့်နှင့်ပြည့်စုံသောပန်းပွင့်ခြင်းတောင်းသည်နူးညံ့ခြင်းနှင့်ကာမဂုဏ်ခံစားခြင်း၊ သင်ဤအံ့ဖွယ်ဆုကျေးဇူး၏လိပ်စာကိုမျှဝေချင်သောစိတ်လှုပ်ရှားမှုများနှင့်အတွေ့အကြုံများအားလုံး၏အရိပ်လက္ခဏာသည်မည်သည့်အံ့ဖွယ်အခမ်းအနားမဆို - မွေးနေ့သို့မဟုတ်နှစ်ပတ်လည်နေ့ဖြစ်သည်။ !! ရွေးချယ်မှုအတွက်အချက်အလက်များ !!!
26730 XNUMX ₽ ချစ်ရသူမိခင်အဘို့အတောင်း။
အနီရောင်နှင့်အဖြူရောင်ရောစပ်သော alstroemeria သည်မှော်အတတ်နှင့်နွေးထွေးသောနွေရာသီနေဝင်ချိန်၏အရိပ်ကိုလိပ်စာပေးသူ၏သက်တမ်းကိုဆောင်ကြဉ်းပေးလိမ့်မည်။ alstroemeria သည်အခြားပန်းများထက်ကြာရှည်စွာသူတို့၏အလှအပကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားသောကြောင့်ကြောင်သောလက်ဆောင်တစ်ခုသည်ကြာရှည်ခံသူအားနှစ်ခြိုက်လိမ့်မည်။
3154 XNUMX ₽ တောက်ပသောနေ့။
ဖွဲ့စည်းမှု: ထုပ်ပိုးခြင်း (တိပ်ဖြင့်ရိုက်ကူးထားသော)၊ အဖြူရောင်နှင်းဆီသည် ၆၀ စင်တီမီတာ ၃ ပေ၊ Aspidistra 60pc၊ ယူကလစ်ပါတ် 3pc၊ Anthurium, Cymbidium Orchid (ဌာနခွဲ) 5pc ။
14202 XNUMX ₽ ပန်းစည်းနံပါတ် ၁၆
မင်းရဲ့ခံစားချက်တွေကိုဖုံးကွယ်မထားပါနဲ့၊ သူတို့အကြောင်းကျွန်တော်တို့ကိုပန်းရောင်နှင်းဆီပန်းတစ်စည်းနဲ့ပြောပြပါ။ ထူးခြားသောအလှအပနှင့်နူးညံ့ကြင်နာမှုဆိုင်ရာပန်းစည်းသည်အစဉ်အလာအားဖြင့်လူငယ်၊ ပန်းပွင့်များသည်လည်းစာနာမှုနှင့်မိန်းကလေးတစ် ဦး အပေါ်စိတ် ၀ င်စားမှုမရှိသောအရိပ်အမြွက်ဖော်ပြမှုဖြစ်သည်။
10876 XNUMX ₽ ပန်းရောင်နှင်းဆီပန်းပန်းစည်း
Peony - 15 pcs ။
peonies ၁၅ လုံးပါသောပန်းစည်း။
12994 XNUMX ₽ ပန်းစည်းနံပါတ် ၂၄၀
Single-ခေါင်းစဉ်နှင်းဆီ - 29 pcs ။
4736 XNUMX ₽ ပန်းရောင်ပျော်ရွှင်မှုကို။
Helianthus (နေကြာ) 15pcs
9690 XNUMX ₽ နေကြာပန်းစည်းအမှတ် ၅
ဆီဆာ - 1 pcs
11657 XNUMX ₽ 101 နှင်းဆီပန်းပန်းစည်း
လာမယ့်နှစ်သစ်အတွက်ကောင်းမွန်တဲ့အသင်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့ Mandarins ။ အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ဗီတာမင်။ ထိုကဲ့သို့သောလိမ္မော်ရောင် ၁၅ လုံးပါသောပန်းစည်းသည်မည်သူကိုမျှစိတ်မဝင်စားစေမည်မဟုတ်ပါ။
4016 XNUMX ₽ လိမ္မော်ရောင်။